737 क्लासिक डाउनलोड र स्थापना
प्रश्न 737 क्लासिक डाउनलोड र स्थापना
1 वर्ष3सप्ताह पहिले #1167 by jopidioot
डाउनलोड र स्थापना पछि, रेडियोस्ट्याक हराइरहेको छ। (केवल एक कालो बक्स)। मैले फोरम जाँच गरें र सुझावहरूको प्रयास गरें, सहि सानो कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको थियो, तर अझै पनी कुनै परिणामको रूपमा। मैले फेरि डाउनलोड र पुन: स्थापना पनि गरे, तर भाग्य छैन। प्लेनले राम्रोसँग काम गर्दछ तर रेडियो छैन।
यो डाउनलोड सुधार गर्न सम्भव छैन, कि यो स्थापना पछि काम गरिरहेको छ?
यो पहिले रिपोर्ट गरिएको तर उत्तर / प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।
अब यो प्राप्त गर्न को लागी आशा छ।
1 वर्ष3सप्ताह पहिले #1168 by rikoooo
तिम्रो सन्देशको लागि धन्यवाद,
मैले यो प्याकेज अपडेट गरेको छुँ, कृपया यस एड-अनको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्, वा यदि तपाईं आफैले रेडियोको सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने बोइ X एक्सएनयूएमएक्स क्लासिकको फोल्डर "प्यानल" बाट 737-400.dll फाइल हटाउनुहोस्। रेडियो झ्याली फेरि देखिने छ।
1 महिना3सप्ताह पहिले #1429 by wayela
सर्वप्रथम तपाईका लागि कडा परिश्रम र आश्चर्यजनक प्याकेजहरूको लागि तपाईलाई ठूलो धन्यवाद P3Dv4। मैले ठूलो छलांग लगाए FSX लाई P3D पछिल्लो बर्षको अन्त्यमा, र तपाईंहरू नयाँ एफएस को मेरो उपयोग को एक विशाल हिस्सा भएको छ।
मैले खुशीसाथ तपाईंको प्याकेज डाउनलोड गरें - बोइing 737 क्लासिक मल्टी लिभरी प्याक FSX & P3D - र सुरुमा, सबै कुरा बिना कुनै समस्याको राम्रोसँग काम गर्यो। यद्यपि पछिल्ला केही हप्ताहरू, हरेक पटक, भित्र P3D, म B737s क्लासिक मध्ये एक लोड गर्दछु। P3Dv4 केवल पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ, लगभग 10 सेकेन्ड पछि विमान लोड भयो र स्क्रिनमा देखा पर्नेछ ............... जबसम्म म अन्य विमानहरू डाउनलोड गर्दैछु र ORBX ल्यान्डक्लास दृश्यहरू, मँ गर्दैन के परिवर्तन भएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। मैले तपाईंको प्याकेजको अद्यावधिक संस्करण फेरि डाउनलोड गरेको छु ............. तर अझै सबै 737 विमानहरूमा समस्या छ।
केहि सुझावहरु छन् जुन तपाईले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?? लामो घुमाउरो प्रश्नको लागि माफी .......
1 महिना2सप्ताह पहिले #1433 by wayela